Jeneraal Galaal ayaa ku eedeeyey dawladaha Yaman iyo Ethiopia iney dalka Soomaaliya ay si xad dhaafka u soo geliyaan Hub iyo saanad
Janaraal Maxamed Nuur galaal oo ka mid ah saraakiisha Xoogga Dalka Soomaaliya kuwa ugu caansan ayaa war saxaafadeed uu siiyey saxaafada Muqdisho ku sheegay in aan cidna waxba looga qaadi karin dagaal iyo Hub la soo galiyo gudaha dalka Soomaaliya. Jeneraal Galaal oo hadalkiissa ku aadanaa edeeyn uu u jeediyey dawladaha Yaman iyo Ethiopia oo uu yiri, waa labada dal ee sida xad dhaafka ah dalka Soomaaliya u soo geliya Hub iyo saanad milatari oo ay ku taageerayaan garab ka mid ah dawlada FKMG oo maleehsiyo gaar ah ku tababaraneysa xeryo ku yaala Goboladda dalka, wuxuuna Jananku tusaale u soo qaatay gobolada bakool, shabeelaha dhexe iyo gobolka Bari oo lagu tababarayo malleeshiyooyin qabiil.
Wuxuu kaloo Janaraal Maxamed Nuur Galaal uu sheegay in ujeedada gaarka ah ee ka danbeysa hawlhaasi hub uruursiga ah ay tahay mid looga danleeyahay in lagaga Aargoosto Qabiilooyin Soomaaliyeed. Waxaana nasiib daro ah buu yiri jananku “in 15 sano ka dib in shacabka Soomaaliyeed loo horseedo colaad sokeeye oo aan cidna waxba looga qaadi Karin”.
Warsaxaafadeedka janaraalka ayaa waxay ku soo abaarantay ka dib, warbixin ay soo saareen Gudi madax banaan oo Qaramada Midoobay ay u xilsaartay in ay la socodaan xayiraada Hubka ee wili saran dalka Soomaaliya in aanan lagu xadgudbin. Warbixintaas ay Qaramada Midoobey soo gudbisay ayaa xusay in ay jiraan dowlado si bareer ah u jabinayaan xayiraada hubka saran dalka Soomaaliya, waxaana warbixinta ku xusan dalalka kala ah Ethiopia,Yaman iyo Ertaria oo iyana lagu tuhunsan yahay. Waxay arrintani soo shaacbaxday kadib markii ku xadgudubka cunaqabateynta hubka saaran Soomaaliya uu ku lug yeeshay Col. Cabdullahi Yuusuf iyo weliba 10 ka mida wasiiradiisa oo lagu soo cadeyey hub ay soo degsadeen iyo qandraasyo hub oo ay soo galeen.
Ma ahan waqtigan hadda la joogo in Soomaaliya ay mar kale ku hoobato dagaal sokeeye oo ku saleysan fikrad qabiil, waxaana haboonaan lahayd in colaad ogahu uu dib u milicsado cawaaqib xumada uu dagaal sokeeye bidey umada Soomaaliyeed.